अनियन्त्रित खानाले यसरी गर्छ कलेजोलाई हानी:: Naya Nepal
अनियन्त्रित खानाले यसरी गर्छ कलेजोलाई हानी
एकथरीको धारणा हुन्छ, जति धेरै खानेकुरा खाइन्छ शरीर उत्तिनै बलियो हुन्छ । अर्काथरी हुन्छन्, खानाका सौखिन । र, तेस्रोथरी हुन्छन् जो मीठोमसिनो भनेपछि आफुलाई रोक्न सक्दैनन् । यी तीन किसिमका प्रवृत्ति हानिकारक छ, खासगरी कलेजोको लागि ।चाडपर्व सुरु हुने बेला छ । यसैपनि चाडपर्वमा हरेकको भान्सामा मीठोमसिनो खानेकुरा पाक्छ । त्यसमाथि दशैं भनेपछि मासुजन्य परिकार खासगरी खसीको पक्कु नभइ हुन्छ । दशैंको बेला नेपाली समाजले अत्याधिक मासु र मदिरा खपत गर्छ । परिवारसँग बस्ने, रमाउने र मीठोमसिनो खाने पर्व हो यो ।यद्यपि यतिबेला ख्याल राख्नुपर्ने कुरा, आश्वयक्ता भन्दा बढी खानेकुराले शरीरका भित्री अंगहरुमा नराम्रो असर पुग्छ । अझ दीर्घरोगी जस्तो कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह छ भने त खानपानमा सर्तकता अपनाउनै पर्छ ।
कलेजोको मूख्य काम नै खानेकुरा पचाउने हो । त्यस क्रममा यसले पित्त उत्पादन गर्छ । पित्त एक तरल पदार्थ हो, जुन पित्तथैलीमा जम्मा भएको चिल्लो तथा वासोलाई पचाउन मद्दत गर्छ । साथै यसले रगत छान्न समेत मद्दत गर्छ । विशेषगरी कलेजोले कार्बोहाइड्रट्सलाई ग्लाइकोजनको रुपमा जम्मा गर्छ र आवश्यक्ता परेको बेलामा त्यसलाई ग्लूकोजको रुपमा निकाल्दछ ।साथै हामीले खाएका कतिपय खराब तत्वलाई निष्कृय बनाउनुका साथै शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिनको उत्पादन गर्दछ, जसले शरीरमा विभिन्न रोगको संक्रमण हुनबाट तथा रक्तश्राव हुनबाट जोगाउँछ । कलेजोमा नै शरीरका लागि आवश्यक पर्ने भिटामिन, मिनरल्स भण्डारण गर्ने भएकोले कलेजोको ख्याल राख्न जरुरी छ ।
अत्याधिक मात्रामा वोसोयुक्त आहारको सेवनले रक्तनलीमा वोसो जम्ने गर्छ र कलेजोले सही तरीकाले काम गर्न नसक्दा शरीरमा विकार जम्मा हुने गर्छ । आवश्यक्ता भन्दा धेरै परिणाममा खाना खाँदा पेट बढ्नुका साथै तौल समेत बढ्ने गर्छ । अझ खानामा पनि एनिमल फ्याटको अधिक सेवनले कलेजोको आर्टरी मोटो हुने गर्छ, जसका कारण पित्तथैलीमा पत्थरी हुने सम्भावना हुने गर्छ ।
कलेजोलाई स्वस्थ राख्न खानपानमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यक्ता अनुसार मात्र खाना खाने, सन्तुलित भोजन गर्ने, कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने तत्वको सेवन गर्ने तथा वोसोयुक्त खानेकुरा कम खानु पर्दछ । अझ मधुमेह वा मोटोपनाको समस्या हुने व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार डाइट चार्ट फलो गर्ने तथा खाना खाँदा थोरै तर पटक-पटक खाने गर्नु पर्दछ ।जीवनशैलीमा साधारण परिवर्तन गरेर पनि कलेजो सम्बन्धि समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । जीवनशैली परिवर्तन गर्ने भन्नाले सन्तुलित आहारको सेवन, पर्याप्त निद्रा, नियमित व्यायाम भन्ने बुझिन्छ ।धेरै खाने व्यक्तिले नियमित रुपमा व्यायाम गर्न जरुरी छ । नियमित व्यायाम गर्नाले शरीरमा वजन बढ्न पाउँदैन । तर नियमित व्यायाम गर्दा सन्तुलित आहार सेवन गर्नु जरुरी छ ।
यो पार्टी एकता एक सूत्रीय आधारमा भएको थियो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने, चुनाव जित्ने, सत्ताको बागडोर हातमा लिएर शासक बन्ने र आफ्नो इच्छा अनुसारको शासन चलाउने । यो देशमा राणाले मोज मस्ती गरे, पञ्चहरुले गरे, काँग्रेसले गरे, अबको पालो नेकपाको । त्यही काम अब ‘कम्युनिस्ट पार्टी’का नाममा भइरहेको छ । धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्, “शासन सत्ता फेरियो तर व्यवहार फेरिएन, जनताको र देशको हालत फेरिएन, किन ?” यतिखेर नेपालमा राज्य व्यवस्था र सरकारको सञ्चालन यही मान्यता, यही सोचाइ र यही मनोग्रन्थीबाट चलेको छ । अनि व्यवहारमा फरक कसरी पाइनु ? कसरी देखिनु ? धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्, “शासन सत्ता फेरियो तर व्यवहार फेरिएन, जनताको र देशको हालत फेरिएन, किन ?” यतिखेर नेपालमा राज्य व्यवस्था र सरकारको सञ्चालन यही मान्यता, यही सोचाइ र यही मनोग्रन्थीबाट चलेको छ । अनि व्यवहारमा फरक कसरी पाइनु ? कसरी देखिनु ? देश र जनताको हालत जे भए पनि सरकारी नेकपाका नेताहरुको त्यो सपना साकार भयो । राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनकारीहरुलाई ‘बैल गाडा चढेर अमेरिका जान हिँडेका’ भनेर खिसीटेउरी गर्ने, उनीहरुलाई अपमानित गरेर नथाक्ने केपी ओली नै गणतन्त्रका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर राज्यको बागडोर आफ्नै इच्छाअनुसार चलाइरहेका छन् । यो विडम्बना नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । उनीहरुले नै केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार बनाएका छन् । सर्वत्र ओलीकरण भएको छ । गणतन्त्रको नाममा ओलीतन्त्र चलेको छ ।
यो संविधानले विद्यमान राज्य व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनी परिभाषित गरेको छ । ५ वर्षसम्म निर्वाध रूपमा शासन चलाउने अधिकार पाएको यो सरकारले आफ्नो तेस्रो वर्षगाँठ मनाउने बेला पनि आइसकेको छैन । तर ती बुद्धिजीवीहरु जसले यो व्यवस्था र प्रणालीलाई ने सर्वोत्कृष्ट मान्छन्, उनीहरुले नै यो व्यवस्थाको तुलना राणा शासनसँग गर्न थालि सके । उनीहरुको यस व्यवस्थाप्रतिको टिप्पणीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । उनीहरुको भनाइ छ, “साँच्चै भन्ने हो भने वर्तमान शासन प्रणाली विश्वको निर्विकल्प र उत्कृष्ट शासन प्रणाली हो । यो शासन प्रणालीमा विश्वभरिका प्रजातन्त्रवादीहरूको अटुट विश्वास छ । तर यसलाई हाम्रो कार्य सम्पादनले लोकप्रिय र भरपर्दो बनाउन सक्नु पर्दछ ।वर्तमान सत्ताधारीहरूको यस प्रणालीप्रति कुनै निष्ठा छैन ।” उनी अगाडि भन्दछन्, “राणाहरूलाई सुनाम र बद्नामको कुनै परवाह थिएन । राज्यको अधिकतम दोहन गर्नु र आफ्नो सुख सुविधा बढाउनु एक सूत्रीय उद्देश्य थियो । अहिलेको सरकार राणा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो अर्थात् आधुनिक संस्करण ।” “मदन, केपी, सीपी, आरके, माधव, झलनाथ समेत भएर बनाएको एमाले पार्टीमा प्रचण्डसमेत मिसिएर वर्तमान नेकपा बनेको छ । अहिले यसैको सरकार छ । यसको कार्यशैली कस्तो छ त ? सरकार कसरी चलिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको रवैया कस्तो छ ? सबै कुरा छर्लङ्ग छन् । राणा र राजाभन्दा ठूला सामन्त देखिएका छन् नेकपाका नेताहरू । राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट छ । के यस्तै हुन्छ त गणतान्त्रिक व्यवस्था ? सरकारमा गएका नेकपाका नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार छोटे राजा वा श्री ३ का जर्नेलको झैँ देखिन्छ ।”
अति भइसकेपछि जनताले राजनीतिक शक्तिहरुले, बौद्धिक समुदायले विकल्प खोज्नु सार्वभौमिक नियम हो । विश्व इतिहास नै यसको साक्षी छ । नेकपा नेतृत्वको यो ओली सरकार यस्तै अतितिर गैरहेको छ । युवाहरुले गठन गरेको ‘इनफ इज् इनफ्’ पनि यी सबैको परिणाम नै होला जस्तो लाग्छ । यो सरकारले गरेका, यसको पालामा भएका अतिको व्याख्या गरी साध्य छैन । यहाँ एक दुई विषय मात्र उठाउने प्रयत्न गरिएको छ– कोभिड १९ र भ्रष्टाचार ।समस्याको समाधान तीनै तहका सरकारले दिन सकेनन्, संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिन सकेन । यदि यो महामारी नभएको भए, सायद यो सरकार टिक्न सक्ने थिएन होला । कोभिडको महामारी अझ फैलिने चिन्ताले आन्दोलकारी सडकमा उत्रिन नसकेर खुम्चिएका छन् । त्यसको फाइदा यो ओली सरकारले लिइरहेको छ । तर समय अवधिको कुरा मात्र हो । नेपालमा अर्को जनआन्दोलन उठ्नु अनिवार्य भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो स्थितिलाई त यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन कुम्ल्याउने अवसरको रूपमा पो प्रयोग ग¥यो । ‘ओम्नी’ भन्ने एउटा फर्जी कम्पनी दर्ता गरेर डुप्लिेकेट स्वास्थ सामग्रीको खरिद बिल देखाएर सवा करोड ? भ्रटाचार गर्नु, यो त निकृष्ट भ्रष्टाचार भएन र ? त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्नेहरु सरकारका माथिल्लो ओहोदामा बसेर यस्तै धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब सरकारी ढिकुटी रित्तिन लाग्यो भनेर जनतालाई उपचार नगर्नु, दुई छाक खाने पनि व्यवस्था नगर्नु सरकारी अपराध भएन ? यी समस्याको समाधान तीनै तहका सरकारले दिन सकेनन्, संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिन सकेन । यदि यो महामारी नभएको भए, सायद यो सरकार टिक्न सक्ने थिएन होला । कोभिडको महामारी अझ फैलिने चिन्ताले आन्दोलकारी सडकमा उत्रिन नसकेर खुम्चिएका छन् । त्यसको फाइदा यो ओली सरकारले लिइरहेको छ । तर समय अवधिको कुरा मात्र हो । नेपालमा अर्को जनआन्दोलन उठ्नु अनिवार्य भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।